Indlela yokwenza ngokona ILS in FSX kunye PA380
umbuzo Indlela yokwenza ngokona ILS in FSX kunye PA380
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #480 by JanneAir15
Molo! Ngoko Ndingathanda ukwazi ukwenza njani ILS kokufika FSX kunye neProjekthi Airbus A380. Ndiyamazi ukuba ukwenza njani ILS ukufika kwezinye iinqwelo-moya kodwa ngenxa-moya Project Airbus is a bit eyahlukileyo andiqinisekanga kangaka. I akazange azame ukwenza ILS kokufika naloo moya kodwa zange isebenze ngaphandle. By the way Mna-moya virtual. Ingaba kukho amaqhosha ezahlukeneyo? Kwaye ke moya i-Air France A380 VC kule sayithi. Ndicela undincede nale.
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #483 by Gh0stRider203
Kuyavunywa ukuba, mna becala #FlyBoeing kule mihla (i-DC-10 kunye Concorde ukuba engabandakanywayo eziphambili ezimbini lol), kodwa ndiyazi ukuba kufuneka ukucofa kwi ILS lvul ibe Nav1, uze emva koko utshintshe ukusuka GPS Nav (Ndidla abe eshushu engundoqo ukuba, kwimeko yam CTRL SHIFT N). Andikho eziqhelekileyo kunye Airbus kodwa ndiyazi kwi 747 (oko kukuthi into kakhulu ukubhabha cuz lenza kakhulu $), nani kufuneka ukhethe APP (indlela) ukufumana ukuba ukutshixa kwi ILS. Akuyi khi ethambekeni glide, ngoko gotta ukwenza oko ngesandla, kodwa loo nto yinto nje ngokulungisa isantya vert.
I themba oku kuyanceda! OKUHLE KODWA!